Daryeel - NETBEINS
Waa saddex gabdhood oo walaalo ah. Aabbahood ma noola, balse dad ehel ah bay heleen oo noloshooda waa lagu filnaaday
By admin February 27, 2019, 11:25 AM
Waa saddex gabdhood oo walaalo ah. Aabbahood ma noola, balse dad ehel ah bay heleen oo noloshooda waa lagu filnaaday. Carruurnimo way ka gudbeen oo waxa ay soo gaareen heer ay noqdaan inamo waawayn. Mid ka mida saddexdooda dhimir ahaan ayay u dhimman tahay, halka labada kale ay dadkooda ku jiraan, walow iyaga laftooda la xanto. Nin la ilmo adeer ah gabdhaha ayaa mustaqbalkooda u baqay jeclaystayna in uu wax uun hiil ah u galo. Waxa uu soo abaabulay kulan uu isugu yeeray dhallinyaradii qoyska. Madashii kulanka ayuu ka soo jeediyay talo ah, in gabdhaha saddexdaa ee adeerkood dhalay la guursado oo aysan isla cidda dhaafin, isaga oo markaa ka dhawaajinaya tuhun ah, haddiiba ay gabdhaha niman qalaad is helaan in aan nugaylkooda loogu naxariisan doonin eeddooduna ay si joogto u soo noqnoqon doonto. Kulankaas guushi uu rabay la ga ma gaarin taladiisaasna waxba la ga ma soo qaadin. Wax waqtigu is guro, labo xilli oo ka la danbeeyay ayaa la ka la guursaday labadii gabdhood ee roonroonaa. Waxaa gurigii ku keliyaysatay oo hooyadeed ku soo hartay gabadhii jirranayd.
Ninkii beri hore talada soo jeediyay ee aan laga hoos qaadi jirin ayuu markaan damiirku si daran u gubay. Waxa uu hoosta ka xarriiqay in ay la ga ma maarmaan tahay in ay gabdhaanu hesho ubad iyada jirkeeda ka soo go’ay oo berri haddii ay hooyadeeda hadda gacanta ku haysaayi meesha ka baxdo u baddela. Waxa uu hoosta ka gaaray go’aan, oo sidee u gaaraa waxaaba hor taalla caqabad wayne? Si Alle. Adeerkiisii gabdhahan dhalay markii uu dhintay waxaa hooyadood dumaalay isaga aabbihii oo ay carruur isu dhaleen. Haddii uu go’aansado guurka gabadhan uu u gargaar is leeyahay waxa uu ku tumanayaa xeer dhaqameed aan qornayn oo aad u qallafsan. Waxa uu seeddi u noqonayaa walaalihii aabbihii dhalay. Ma sahlana.
Si kastaba ha ahaatee waxa uu ahaa nin ay wax u muuqdeen. Maalin caadi ah balse aan wax caadi ahi dhacayn buu soo jeediyay in uu isagu guursanayo gabadha hartay. Ha ba la la yaabo haddii la rabo qof kastana uurka male u gooniya ha gashto’e waa la la qaatay. Wax yar dabadeedna waa loo mehershay. Waxa uu u qaaday qurbaha ka dibna ay aroos ku galeen ugu danbaynna ay si rasmi ah u degeen. Waxa ay wada joogeen in muddo ah oo ku siman labo sanno. Labadaas sanno wax ubad ah isu ma ay dhalin. Tani waa mushkilad uusan ku talo galin culays bayna ku noqotay. Hadafkiisii ayuu u baqay. Waxa uu miciinsaday fekrad ay asal u lahaayeen dadkiisu ilaa awooweyaal. Alle xaggii in uu u cararo ayuu go’aansaday. Waxa uu u soo jaray gabadhii tikid uu ugu soo dirayo Soomaaliya.
Hooyadeed ayuu ka codsaday in ay gayso gobolkii ay ka soo jeedeen, ka dibna ay isugu yeerto inta ku xaqa leh inta ugu sii dhaw ee qaraabadeeda ah si ay ugu duceeyaan. Way yeeshay hooyadii sidii bayna samaysay. Waa loo Allebaryay Quraan bandan ayaana loo akhriyay. Way ka soo laabteen gobolkii, wax yar marka ay joogeenna gabadhii waxaa loo ceshay dibaddii ay degganayd. Markaan sidii uu jeclaa bay wax noqdeen oo bilo ka dib uur baa ku soo baxay gabadhii. Soomaaliya ayaa dib loogu soo ceshay hooyadeed agteeda ayayna ku umushay. Way ummul baxday. Markii ay ka kabatay dhibkii dhalmada oo ay isa soo ceshatay jir ahaan ayaa haddana dibaddii dib loogu ceshay. Cunuggeedii yaraa waa laga reebay, sababtoo ah dareen hooyonnimo oo buuxa iyo masuuliyad ay ubad ku koriso midna ma ay qabin.
Sannad ayay haddana wada joogeen. Mar labaad uur kale ayaa soo baxay. Kolkii uu sidkeedu soo dhawaaday ayaa haddana sidii hore Soomaaliya dib loogu soo ceshay. Markaanna hooyadeed agteeda ayay si nabad ah ugu umushay. Ilmahaan dhalashadiisii ka dib ninkii waxa uu gabadha hooyadeed ku qanciyay in aysan intaan ka badan xammili karin dhibka uurka iyo dhalmada, maaddaama oo aysan ahayn qof sidii ay ahayd naftiisa uga fekaya is ka daa ilmo uurkeeda jiifee. Haddii Alle u daayo in labada cunug ay ku filan yihiinna, wuu ku daray soddohdiina waa ay la qaadatay.
Dalka ayuu barbar ka dejiyay biilna waa uu u qoray hooyadeedna waa uu ku adkeeyay in ay ilmahaa iyo hooyadood isku hayso iyada oo awalba damiir ahaan intaa u farnayd.
Xilligaan la joogo gabadhii weli waa qof aan ogaal fiican lahayn, dareen hooyonnimo oo badanina uusan ku jirin, balse haysata labo cunug oo caafimaad qaba oo ay iyadu dhashay oo iyagu og in ay hooyadood tahay.
Ma u baahannahay xusuus-qor?